Beekama Ragassa Jabana Qeerransoo Oromoo durani.
Beekama Ragassa Jabana
Qeerroo fi Qeeransoof Dhaammsan Qaba
Qeeransoo ABO ISIS harka hafee Italia galee jira Oromoo dirmadhaf.
Beekama Ragassa Jabana 1980 kassee akka lakofsa Habashati Lixa Oromiya keessa jaalan qabsoo qaqalii waliin dire dhiha qabsoo irra kan turedha. Beekama Ragassa fi Oboleetiin isaa bara 1980 kassani loltu ABO turan Obboleetin isaa Abarash Ragassa Mandi irrati dubartoota 4 waliin ummata durati ajjeefamte. Beekaman ilee Dhidheesa fi Gimbiti hidhamudhan dararama hedduu dararame jira. Ogannota ABO qoondaloota akka Milkessa Gadaa, korme Dinqa, Ede’a duka turte waan beektu himuu qabda jeechun shakkii guda irra qabanin enyuu ilee caalaa qoormata fi xiyeefanoo irrati goodhani rakkisa akka turen hubaneera. Keesummatu bara 1994 Dangi irrati Miseensoon ABO 20 hark diinati kufan yeroo ajjeefaman siitu waraanaa ABO Dangiti fidee jeechudhan qabamee Konkoolata irrati hidhani Magaala erga naaneesani booda Mudhii gadii awalani achiiti ummata durati reeban. Reebiicha fi dararama kana booda Qarshi 5,000 fi hidha wagga 1 adaban jiru.
Namoota ani yakka isaani hin beekne fi namoota qunammiti tokko ilee ani waliin hin qabne namoota heddu akka inni soban yakkuuf dararama guda irran ga’aa turan. Namoota kana wanan hin beeknen hin yaaku jeedhe reebiichaaf Torichi goosa hunda ana irrati raawatame jira. TPLF namooti kun qabeenya waan qabanif soban yakkite Qabeenya isaan samuuf turte. Tikii Mootumma Lixa Wallaga Mohammed Namni jeedhamu dhalootan Somale fi Oromoo kan ta’ee Magaala Manditi hidhe isaa darara akka ture ibsane jira. Adunya kana irrati Namni tokko hayyama mana murti malee nama barbadee irrati waan barbade raawwachuf mirga gutuu kan qabu Ethiopia keessatti qoofadha. Biyyan dhaladhe lixa Wallaga Aannaa Qilxu Kara, Mandi, Gimbi, Didhessa, Maikalawiti yakki ana irrati rawwatame kitaaba guda tokko ta’uu ni danda’aa. Gochaan TPLF qabsa’aoota Oromoo irrati raawwate guyyaa tokko Oromoon gumma isaan basuu hin olu jeedhe jira
Bara 1997 yeoo filaanno adeemisfame WFDO bakka bu’uudhan Edeeroo agamasa irratti koree qideesituu ta’uun deggersa goochu isaati mani isaa samame. Magaala Qilxuu kara keessati bara 1998 finciilla dida garbuma geggefame baratoon 4 ajjeefamani 8 yeroo mada’an Beekama Ragassa fi hiriyan isaa Raga’aa Mulatu wara dura qabaman mana hidhati darbataman kessa wara dura turan. Hiriyyan Beekma Ragasa Obbo Raga’aa Mulatu yeroo amma kana Mana hidha Qilnxoo keessati nama dararama jirudha. Ergasi booda ammoo Mandi fi Gimbiti hidhamee dararame achii ammoo naannoo sana irra ari’ame bara 1998 akka naannoo jireenya isaa irra baqate Finfinne galuu godhamee jira. Aanna Mansibu fi Qilxu Kara bara Chartera 1982-1984 nannoo Bilisomee ture waan ta’eef erga ABOn achii ba’ee booda ummata naannoo sana keessatu miseensoota ABO, Jajjajabe fi loltuun ABO akka TPLF sa’aa barbaadeti bakka barbaadeti geesite ajeesisuuf mirga gutuu qabdi turte. Yakki Obbolleeti koo lubu ishee galafate Oromoo ta'u isheetiif TPLF miseensoota ABO gaafi tokko malee ajjeesuf mirga akka qabdu ofi godhu isheeti. Manasibu Gaafa ABOn ture Ganata Rabii ta’ee ture gaafa ABOn achii ba’ee kaasse sabi suni hanga haraati Mana Abidati darbatame gubata jira. Akka lammii lamaffaati ilaalama, TPLF gaafi sabi Manasibu gaafatuu hundaaf ABOn deebi isiinf haalatuu ABOn dhufe isiin haagargaruu jeeti.
Gara Finfinneti erga baqate booda Hordoof Tiikka wayyaneti qabame buufata Poolis 2faa Markato jiruti guyya 6 erga hidhamee booda maikalawiti ji’aa 3 hidhamu isaa irra iyuu daabbale OPDO nama Ambisa jeedhamun dorsifamuu isaa fi akkeekachisi ciiman waan keenameefif biyya isaa jalatuu, ijoole isaa, maati isaa fi frootan isaa dhisee gara Sudanti baqate. Sudan yoo deeme ilee tiikki wayyanee Finfinne jiruuf biyya Sudan Kartum jiru waluma qixee hordoofin itti cimuu isaati rakko fi soda guda keessa Sudan jiracha erga ture booda ongee Sudan fi Libya giduu jiru dararama hama, beela fi dheebu hunda danda’ee Libiya galuuf dirqame. Rakko kan fi risk akkasiti kan na erge biyya koo keessa jirachu wanan dadhabef furmata barbaadan ba’ee. Hubannoo ga’aa wanan hin qabnef furmata garii utuu hin tane filannoo isaa caalaa hama fi gadisisa keessa galuufn dirqame. Hara ilee ijoollen Oromoo rakko biyya ala jiru hin beekan, keessatu warii akka koo rakko lubu isaani balesuu utuu hin qabatiin biyya ba’aan obsa dhabani hamilen cabdee kan du’aaf of saxiilan jiru.
Libya galuun isaa nageenya inni barbaaduu isaaf hin lanee, Libya keessatti daldaltoon Sudan fi Libya akka garbati nama guguratan harkati kufee yeroo heddu guguramuuf dirqame jira. Kan kana caaluu haalii ciimman ammoo yakkamtoon nama Libya keessati nama ajjeeftu ISIS warii jeedhamuu namoota biyya ala qabatan yeroo barbaadan hojeechifata yoo barbaadan ammoo morma qalani ajjeesan harkati yeroo 2 qabame yeroo tokko ji’a hidhan darara turan yeroo lamaffaa ammoo wagga 1 gutuu mana hidha lafa jalati, lafa fi samiin walti gubu keessati bishan fi midhan malee haala hama keessati dararama ture. Yeroo namootni Ethiopian 30 ajjeefaman akka caraa ta’ee lubun isaa baduu irra hafte rakko hiidha fi dararamati dabarte jirti.
Biyya Libya keessatti lammiin Ethiopia heddu akkuma ajjeefama turan Beekama lubun isaa du’uun yoo hafee ilee rakko sukunesatuu irratti rawwatama ture. Gartun Libya keessa nama gurguran, gartuu wara nama ajjeesuu ISIS jeedhamtu fi Mana hiidha keessati torchii haman irra ga’uu isaa irra iyuu sanja dhan duda isaa keesa, milaa isaa fi harka isaa irra waraname utuu yaala tokko hin argatiin rabi jiradhuu waan jeedhef nama jiratedha. ABO keessati ijooluma hirmachuu isaa beelaa fi dheebuu, ho’aa fi onnge dandamachuuf akka isaa gargare ibsaate jira. Oromoo ta’ee dhalachuu koo qoofan biyya koo fi biyya horma irratti yakki dhala nama irratti raawaachuu hin malee anna irratti rawwatame jira jeedha. Garuu gargarsa waaqa Oromoo fi hamileen mulata koof qabutu abdii na hin kutachifne.
Beekama Ragassa Jabana haala hama keessa darbe Onkololessa 5, 2016 Italia gale jira, hata'uu malee hanga ammati lammi Oromoo tokko ilee biyya Italia keessa argachuu hin dandeenye. Mana hiidha keessati midha guda keessa namni ture kun qami isaa sanja dhan waraname nama midhama dha. Haalaa kana keessatti Oromoo naannoo Italia Milan, Trino Geneva fi France jiran akka qaman dirmatanfi, warii fagoo jiran ilee gargarsa goochufn hamilee isaa jabeesun barbaachisadha jeena.
Tigiroon Obbolleeti koo ajjeesani anna hiidhani na dararuu isaan caalaa mallaaqaa ani hin qabne dirqaman akkan kafaluu na goodhan. Tigiren namaf gaduu hin beektu. Ana qoofa utuu hin tanee daldaltoon Oromoo heddun qabeenya isani akkasitiin samani ittin EEFRT ijaratan. Lammi Ethiopia akkan hin tane yakka TPLF anna irratti raawwatee irran baradhe, Tigiren Oromoo gara jabeenya haman akka ajjeesa turte guyyaa tokko balinan saba koof dhiyeesun yaala.
Qeerroo fi Qeerraansoof Dhaammsan Qaba jeedha.
Haalii Ethiopia keessa jira ulfatadha, hunda isaa keessan ture argen jira. Halii anni biya Sudan Libya fi Galana Medeteraniya keessati arge ammoo haala biyya keessa sana caala hama dha. Anni Qeeransoon gaafan bosona ture gamada, of jalata fi abdi qabesan ture, Finfinee harka diina jalati ilee qabsoof abdi hin kutanen ture, gorsa ga’aa dhabuu fi qabso hidhannoo lafachun biyya alatti lubu koo tursu jeedhe fillaanno anni filladhe biyya Sudan, Libiya Galana Medeterania keessatti yeroo ilaaltu ammoo abdii jirenya fi egera hundatu dhkana’aa. Ijoolleen Oromoo akka baratanifiin isiinti dhamadha lafa abba keessani Bosona Oromiyaa keessatti gala diina lola sama nyadha jiradha male mila keessan futan gara baqati hin deemina, nama 5_hanga 10 wal gurmessatti qabeenya Oromoo diini samee nyatuu irra fudha nyadha. Meesha fi rasaasaa ilee kanuma diini hidhate sana hikachisun ni danda’ama. Qeerroon Oromoo qabeenya diina fi meesha diina samtee biyya kee kessa diina basuu dandeesa. Biyya hormati garuu garii itti baqatuu hin jiru Bosoni ilee hin jiru, ijoollen Oromoo Sudan fi Lbiya gidutti dhumte biyya Libiya fi Galana Medeterania keessati dhumte Oromiya Bilisomsuu dandeesi turte. Median Oromoo fi Dhaabileen Oromoo ilee dhamasa koo kana ijoollee Oromoo WBO fi Qeeraansoof na dabarsa. Qabsa’ee argen jira, reebame turchii ta’een jira, hiidhame argen jira, soda fi of shakkin Finfinne keessa jiradhe argen jira. Kana hunda caalaa filaannoo inni gudan laga abba of keessatti akka gaafa qabsoo irra ture sana caalaa kan nama boonsuu hin jiru. Laga of biyya of keessatti diina dura dhabatan warreegamun gamachuu fi seena guda qaba.